पर्यटकको रोजाइमा जन्तीलुङ र मरामकोट – Dainik Lumbini
पर्यटकको रोजाइमा जन्तीलुङ र मरामकोट
पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकामा अवस्थित जन्तीलुङ्ग र मरामकोट पर्यटकहरूको रोजाई बन्दै गएको छ । तिनाउको वडा नं. ५ मा पर्ने मरामकोट र वडा नं. ६ मा पर्ने जन्तीलुङ्गमा पछिल्लो समयमा आन्तरिक एवम् बाह्य पर्यटकहरू घुम्न आउने क्रम बढेको हो । जिल्लाको सदरमुकाम तानसेनबाट झण्डै डेढ घण्टाको समयमा पुग्ने सकिने उक्त पर्यटकीय स्थल सिद्वार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पा–बुटवल सडक खण्डको डुम्रेबाट झण्डै १ घण्टामा जन्तीलुङ्ग पुग्न सकिन्छ । जन्तीलुङ्गबाट झण्डै आधा घण्टाको समयमा अर्को पर्यटकीय गन्तव्य स्थल मरामकोट पुग्न सकिन्छ ।
प्राकृतिक रूपमा निर्माण भएका उक्त डाँडाहरूलाई तिनाउ गाउँपालिकाले मर्मत सम्भार गरी आकर्षक बनाएको छ ।
जन्तीलुङ्गको मुख्य विशेषता उक्त डाँडाबाट मनोरम हिम शृंखला, पहाडका विभिन्न स्थानहरू एवम् तराई एकै स्थानबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ । जन्तीलुङ्गबाट हिमालहरू, पाल्पाको सदरमुकाम तानसेन, प्रभास क्षेत्र एवम् अन्य पहाडी भू–भाग, तराईका नवलपरासी, रूपन्देहीलगायतका ठाउँहरूको एकै स्थानबाट प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी मरामकोटको पनि छुट्टै विशेषता रहेको छ । मरामकोट पर्यटकहरू फोटो खिच्नको लागि आउने गर्दछन् । मरामकोटबाट पनि तानसेन, डुम्रे बजारलगायत अन्य हरियाली डाँडाहरूसहित रमणीय स्थलहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ । नवलपरासीबाट घुम्नको लागि जन्तुङ्ग र मरामकोट आएका आशिस रास्कोटीले जन्तीलुङ्ग र मरामकोट निकै रमणीय स्थल रहेको बताए । नवलपरासीबाट साथीहरूसँग घुम्न आएका रास्कोटीले भने –‘जन्तीलुङ्ग र मरामकोटमा मगर होमस्टे सञ्चालन रहेको सुनेर हामी साथीहरू एक दिन बस्ने गरी आएका छौं ।’
त्यस्तै माथागढी बहादुरपुरबाट घुम्न आएका इबन ढेंगाले जन्तीलुङ्गबाट सेता हिमचुलीहरू, पहाडकी रानी तानसेनलगायत पहाडी भू–भागको साथसाथै समथर तराई भू–भागको अवलोकन गर्न पाउँदा आनन्द लागेको बताए । उनी मरामकोटमा साथीहरूसँगै पहाडका टाकुरामा बसेर फोटो खिच्दै थिए ।
स्थानीय रीमा लम्तरीले पछिल्लो समयमा पर्यटकहरूको संख्यामा वृद्धि भइरहेको बताइन् । पाल्पा, रूपन्देही, नवलपरासीलगायतका जिल्लाहरूबाट दैनिक झण्डै १ सयको हाराहारीमा आन्तरिक पर्यटकहरूको जन्तीलुङ्गमा आउने गरेको उनले बताइन् । लम्तरीले गाउँपालिकाको सहयोगमा होमस्टे सञ्चालन गरेको बताइन् । गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग र स्थानीय मगर समुदायका नागरिकहरूको सहकार्यमा सुविधा सम्पन्न होमस्टे सञ्चालन गरी पर्यटकहरूलाई खाने बस्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् ।
त्यस्तै मरामकोटका अर्का स्थानीय दिलकुमारी दर्लामीले गाउँपालिकाको सहकार्यमा होमस्टे सञ्चालन गरिरहेको बताइन । होमस्टेबाट पर्यटकहरूलाई स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने खानेकुराहरूको व्यवस्था गर्ने, मगर समुदायको साँस्कृतिकहरूको प्रदर्शन गर्ने कार्य गरेको उनले बताए । पर्यटकहरूको मागअनुसार ठुलो नाच, मारूनी नाच, झाम्रे नाच, दोहोरी नाचहरू प्रदर्शन गर्ने गरेको उनले बताए ।
वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष दमबहादुर दर्लामीले ऐतिहासिक रूपमा मगर भाषाको मराम्च भन्नाले माइ र कोट भन्नाले पूजा गर्ने ठाउँ रहेको बताए । पछि पर्यटकहरूको आगमनमा वृद्धिसँगै मराम्च गाउँको नाम परिवर्तन हुँदै मरामकोट हुन गएको ईतिहास रहेको उनले बताए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीमगरले तिनाउ गाउँपालिकाले पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यअन्तर्गत जन्तीलुङ्ग र मराकोटमा गरेको बताए । दुईवटै पर्यटकीय क्षेत्र तिनाउका अग्ला डाँडाहरू रहेको बताउँदै उक्त डाँडाबाट लामो हिमशृङ्खलाहरू, दक्षिण तर्फबाट तराईका भू–भाग र वरिपरि हरियाली वातावरणको अवलोकन गर्न सकिने भएकोले पर्यटकीय आकर्षण केन्द्र रहेको उनले बताए । गाउँपालिकाले १५ घर धुरिलाई तालिम, होमस्टेका लागि आवश्यक सामग्रीहरू प्रदान, भ्रमण गराई होमस्टेको सञ्चालन गरेको उनले बताए । गाउँपालिकाबाट १० लाख खर्च गरी भ्यू प्वाइन्टको निर्माण, मस्यामबाट मरामकोट पुग्नको लागि २० लाख बजेटमा मोटरबाटो सञ्चालन, ५ लाख बजेटमा आकासे पानी संकलनको लागि पोखरी निर्माण, १० लाख बजेटमा अतिथी सत्कार भवन निर्माण, शौचालयलगायत सरसफाइका कार्यहरू गरेको उनले बताए । गाउँपालिकाले पर्यटकहरूलाई स्थानीय लोकल खानेकुराको व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थानीय नागरिकहरूलाई तरकारी खेती, कुखुरा पालनको लागि अनुदान प्रदान गरेको उनले बताए । मरामकोटमा भ्यू प्वाइन्टको निर्माण, नजिकैको गुफाको संरक्षण, करिब १० लाख बजेटमा डाँडाको हरियाली र सुन्दरीकरणको लागि दालचिनिका बिरूवा रोपण, पर्यटकको सुरक्षालाई मध्येनजर गरी डाँडा वरपर रेलिङ गरिएको र जोरधाराबाट मरामकोट निस्कनको लागि ३५ लाख बजेटमा सडक निर्माण गरिएको बताउँदै यो वर्ष करिब ५० लाखमा बजेटमा स्तरउन्नतीको कार्य गरिने बताए ।
उदाहरणीय बन्दै साधना महिला विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी
क्वारेन्टाइनमा पनि जातीय विभेद